'Cancel Joss Whedon': niatrika famelezana mafy ny talen'ny mpamaly faty taorian'ny fiampangana an'i Charisma Carpenter - Pop-Kolontsaina
'Cancel Joss Whedon': niatrika famelezana mafy ny talen'ny mpamaly faty taorian'ny fiampangana an'i Charisma Carpenter
Ny mpilalao sarimihetsika amerikana Charisma Carpenter dia tonga niaraka tamin'ny fiampangana mahavariana momba ny fanararaotana atao amin'ny mpamorona 'Buffy The Vampire Slayer', Joss Whedon.
Vao tsy ela akory izay ilay mpilalao sarimihetsika 50 taona vao niditra tamin'ny media sosialy mba hampiharihary ny talen'ny sarimihetsika toa ny 'The Avengers' sy ny tohiny, 'Age of Ultron'.
Naka aingam-panahy avy amin'ilay mpilalao sarimihetsika 'Justice League' Ray Fisher, dia nanapa-kevitra ny hanapaka ny fahanginany tamin'ny lahatsoratra mandratra fo izy:
Ny fahamarinako. #IStandWithRayFisher pic.twitter.com/eNjYcJ6zwP
- mpandrafitra karisma (@AllCharisma) 10 Febroary 2021
Raha nanambara fa nanararaotra ny heriny tamin'ny seho fampisehoana toa an'i 'Buffy The Vampire Slayer' sy 'Angel' i Joss Whedon, dia nanambara i Charisma Carpenter fa ny traikefa dia namela azy 'toe-batana maharitra' - ny vokany izay nitohizany hatrany mandraka androany.
Niresaka momba ny fiampangana an'i Ray Fisher izy tamin'ny fahavaratra lasa teo, izay nipoiran'ny kintan'ny Justice League tamin'ny fanoherana mafy ny fitsaboana an'i Joss Whedon teo an-toerana momba ny mpilalao sy ny ekipany, izay nofaritany ho 'henjana, mpanararaotra, tsy matihanina ary tsy ekena tanteraka':
Ny fitsaboana an'i Joss Wheadon eo an-toerana ny mpilalao sy ny ekipan'ny Justice League dia maloto, mpanararaotra, tsy matihanina ary tsy ekena tanteraka.
Nahazo alalana tamin'i Geoff Johns sy Jon Berg izy tamin'ny lafiny maro.
Fandraisana andraikitra> Fialamboly
- Ray Fisher (@ ray8fisher) 1 Jolay 2020
Nahazo aingam-panahy avy amin'ny fiampangana azy tsy natahotra, Charisma Carpenter dia nanohy nanambara antsipiriany manafintohina momba ny hadisoana nataon'i Joss Whedon, izay miainga amin'ny fanalam-baraka azy amin'ny vatany raha bevohoka izy, hatramin'ny fanodikodinana ny zavatra inoany amin'ny ankapobeny:
'Joss dia manana tantaram-pitiavana lozabe. Namorona tontolon'ny asa feno fankahalana sy misy poizina izy hatramin'ny fahazazany. Fantatro satria niainako manokana izany. Naverimberina. Ratsy saina izy ary manaikitra, manala baraka ny hafa ampahibemaso, ary matetika no lalaovina ankafiziny, mifanenjika amin'ny olona hifaninana sy hifanintona amin'ny fijeriny sy ny fankasitrahany '
Manoloana ireo fiampangana vaovao manafintohina an'i Joss Whedon ireo, ny fiarahamonina an-tserasera izao dia nanomboka niantso ny fanafoanana azy indray mandeha.
Joss Whedon dia niteraka hatezerana manoloana ny fiampangana fanararaotana tato ho ato
Tamin'ny famelabelarana ilay bitsika voalohany, dia nandinika ny antsipiriany misimisy momba ny fihetsiky ny poizina izy ary nilaza fa voaroaka tsy tamim-pialana tamin'ilay fampisehoana, noho ny baikony.
Nanondro azy ho 'vampire' i Charisma Carpenter ary nanomboka nitsikera mahery vaika ny fiaraha-monina sy ny indostria ankehitriny, izay manana fahazarana manome voninahitra ireo niharam-boina sy manome voninahitra ireo mpanararaotra:
iza io meme bandy io
Ny fanambarany mampihetsi-po dia nanitatra ny firaisankina bebe kokoa tamin'i Ray Fisher, satria nanambara izy fa tsy afaka mangina intsony. Manantena izy fa ny fandrosoany dia hampiorina ny herim-po amin'ny maro hafa hanaraka izany.
Nahazo fanampiana avy amin'ny kintan'ny mpiara-dia 'Buffy', Amber Benson, izay nanohana ny fitakian'i Charisma izy:
Buffy dia tontolo misy poizina ary manomboka eo an-tampony izy io. @AllCharisma miteny ny marina ary manohana azy 100% aho. Betsaka ny fahasimbana natao nandritra izany fotoana izany ary maro amintsika no mbola manodina azy roapolo taona lasa izay. #IStandWithRayFisher #IzahoMahafantatraCarisma https://t.co/WJAmDGm76C
- Amber Benson (@amber_benson) 10 Febroary 2021
Tsy i Charisma Carpenter sy Ray Fisher irery no mpilalao roa nalaza niaraka tamin'ny antsipiriany manaitra momba ny fihetsika mampiahiahy nataon'i Joss Whedon, satria vao avy nanatevin-daharana azy ireo i Paul Bettany, izay mampiseho an'i Vision ao amin'ny MCU.
Nanohy ny fanambarany izy fa toa tsy sahy nanala sarona ireo olona tsy miankina tao amin'ny sehatra iray tamin'ny Age of Ultron i Joss Whedon, izay nihaonana tamim-pahatahorana avy hatrany tamin'ny mpilalao sy ny ekipa.
Rehefa avy nahita izay ho endrik'ilay hevitra teo amin'ny efijery izy vao nanapa-kevitra ny hanohitra izany.
Manoloana ireo fiampangana vaovao manafintohina natolotr'i Charisma Carpenter an'i Joss Whedon ireo dia nanjary hentitra ny Twitter. Ireo mpankafy tezitra dia nanambara ny heviny mitovy:
Izany dia manazava be dia be momba ny lalana nakan'ny toetran'i Cordelia ny antsasaky ny anjely. Screw Joss Wheaton, diso tafahoatra izy, ny tena kintan'i Buffy sy Angel no mpilalao sy mpilalao sarimihetsika
- Dia Lancea (@DiaLanceaFFXIV) 10 Febroary 2021
lazao amin'ny tratranao FOTSINY joss whedon https://t.co/qe5k7i5qCn
- muna (@Muna_Mire) 10 Febroary 2021
Tena ilaina ny mamaky ity kaonty ity ary mieritreritra ny fomba nitondran'i Joss Whedon ireo vehivavy niasa ho azy tamin'ny fotoana nanomezana loka azy noho ny fitiavany vehivavy. https://t.co/icQpp33KN3
- Constance Grady (@constancegrady) 10 Febroary 2021
raha mbola tsy namaky an'i Kai Cole tamin'ny 2017 ianao momba ny nanambadianao, nofitahin'i Joss Whedon sy gaslit anao dia vakio manaraka izany https://t.co/ykvLcUqK4L
- adam (@adamjmoussa) 10 Febroary 2021
Nivoatra tamin'ny lasa ny filan'ny Joss Whedon izahay.
- Ana Mardoll (@AnaMardoll) 10 Febroary 2021
Tokony holazaina ihany koa fa raha tianao ny asany taloha izay tsy mahatonga anao ho Olona Ratsy; afaka mitia zavatra ianao ary mbola mieritreritra ihany fa ny mpamorona dia tsy mila omena toerana ambony fahefana amin'ny hafa.
Ity dia fanararaotana maharikoriko amin'ny fanararaotan'i Joss Whedon fahefana.
Mampalahelo ahy ny mahafantatra fa ny iray amin'ireo olo-malaza amin'ny fahitalavitra tiako indrindra dia noforonina tao anaty toe-javatra nampivadi-po sy nanambany olona toy izany.
Misaotra anao @AllCharisma noho izay rehetra nomenao anay. Manantena aho fa hahita fandriampahalemana tsy ho ela ianao. ♥ https://t.co/6Os86kZ6RK
- Sarah Conley (@imsarahconley) 10 Febroary 2021
#MahatakatraMaroCharisma #IStandWithRayFisher Mamparary ahy izany fa ny roa amin'ireo seho tiako indrindra, izay nanome hery tovovavy maro be tamin'ny famoronana, dia natao tao anatin'ny toe-javatra toy izany ho an'ireo vehivavy izay aingam-panahy ireo. Joss Whedon tsy tokony hiasa intsony. https://t.co/ub5xNWUXNZ
- Selina Kray 🇨🇦 (@selinakray) 10 Febroary 2021
na izany na tsy izany dia andro tsara ilazana ny FUCK joss whedon sy ny fitiavana rehetra eto an-tany ho an'ny mpandrafitra karisma masina masina bro
sarimihetsika dwayne johnson amin'ny netflix
- emily Woody (@EmilyWoody) 10 Febroary 2021
Buffy the Vampire Slayer nanova tanteraka ny fiainako.
avelao aho hahatsapa ho mifandray mandritra ny fotoana tena manirery tamin'ny fahatanorako.
nanome ahy vondron'olona namana tsy mampino rehefa olon-dehibe.
nahatonga ahy ho raiki-pitia tamin'ny fahita lavitra.
Ho tiako foana izany ary hotehiriziko akaiky eo amin'ny fiainako.
Fitia Joss Whedon.
- Sarah (@sarekins) 10 Febroary 2021
heveriko fa fotoana tokony hitsahantsika tsy manivana ny anarany intsony ary milaza azy amin'ny tena izy - joss whedon dia sombin-javatra ratsy sy tsy tia vehivavy ary ny fomba nitondrany ny charisma sy ny maro hafa dia maharikoriko ary tsy tokony hiala amin'izany izy
- cor 🦔 jase day! (@ozbcrnes) 10 Febroary 2021
buffy dia midika fa ary hisy heviny be dia be amiko foana, fa izahay amin'ny maha-fiarahamonina dia namindra ny filana an'i jose whedon sy ny mitovy aminy ary izy no mendrika an'io isa io.
- Jessie (@ vaughan075) 10 Febroary 2021
Raha mbola tsy nanao izany ianao dia atsaharo ny manompo an'i Joss Whedon. https://t.co/wNIP73k7Vq
- Amber Ying 應 緣 🇹🇼 ️‍ 🦁 (@amberying) 10 Febroary 2021
efa fantatro #josswhedon dia fako tamin'ny nandrenesako ny fampijaliana azy tamin'ny Karisma Karisma. Rehefa hitako fa nitantana ny Avengers izy dia niandry aho raha toa ka hanao zavatra toa izany izy ka ho hitan'ny mpilalao. Mila roahina izy ary tsy hitarika mivantana mihitsy #IStandWithRayFisher pic.twitter.com/kCJbgq8dwY
- Donnalyn Washington ConversationsJohnJennings (@Notingshaw) 10 Febroary 2021
Tokony handeha any am-ponja izy, tsy manasazy ny manan-karena sy afaka
- Alfred pennyworth (@ Alfredp58536892) 10 Febroary 2021
Ny olona miresaka momba ny kolontsaina fanafoanana dia toa manadino fa i Joss Whedon dia manohy miasa amin'ny tetikasa goavambe eo amin'ny sehatry ny indostria, na dia efa taona maro lasa aza ny tantara momba ny fihetsika masiaka sy tsy tia mandinika azy. Lehibe tao amin'ny Buffy, Angel, Firefly, Dollhouse aho - saingy olombelona maloto izy. https://t.co/Ui75hhCxaz
- ᴮᴱkaps⁷ (@lazycomms) 10 Febroary 2021
Raha tena misy ny kolontsaina manafoana, maninona aho no tsy maintsy maheno momba an'i joss whedon ho sombin-taona isan-taona
- Jessica Howard (@justjessisfine) 10 Febroary 2021
Tsara foana ny manafoana an'i Joss Whedon tbh.
- Scott (@marioistluigist) 10 Febroary 2021
Manoloana ireo fiampangana natao tato ho ato ireo, mpikambana marobe amin'ny fiarahamonina an-tserasera no nivoaka nanohana ny duo an'i Charisma Carpenter sy Ray Fisher, niaraka tamin'ny diezy #IStandWithRayFisher sy #IStandWithCharismaCarpenter izay nalaza manerantany.
Mbola tsy namoaka fanambarana ofisialy ho valiny i Joss Whedon, mitohy hatrany ny tsy fitovian-kevitra amin'ny Internet, miaraka amin'ny tantarany fandikan-dalàna marobe izay mitaky fahatezerana amin'ny Internet.
toa sosotra amiko foana ny vady
rey mistery fanavaozana ny ratra amin'ny maso
Te handao ny fiainako aho
malahelo anao mafy aho dia maharary